Si na Compendium Blogware juo? | Martech Zone
Saturday, July 18, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ee, m ga-eme. Emechara m hapụ Compendium Blogware. Na-ada ụda jọgburu onwe ya, ọ bụghị ya? Chụpụ a na-enwekarị echiche na - adịghị mma - mana ọ bụghị n'okwu a!
Fọdụ folks nwere ike iche Chris Baggott, Ali Sales na m bụ nnọọ akụ… gịnị kpatara Ngwakọta hapụ m ka m laa? Kedu ihe kpatara m ga - eji hapụ ụlọ ọrụ na - eme nha okpukpu abụọ kwa afọ? Ahụrụ m Compendium n'anya ma ha hụrụ m n'anya… gịnị kpatara o ji bụrụ ihe ezi uche dị na m ịhapụ arụkwaghịm?
Azịza ya bụ otu n'ime elekwasị anya na ohere.
Ọ bụ ezie na m na-apụ ọrụ na Compendium - Agaghị m ahapụ Compendium Blogware. N'ezie, Compendium bụ onye ahịa mbụ nke DK New Media, LLC - ụlọ ọrụ ọhụrụ m. Ebu m onye na eketa oke na Compendium - ebe mu na ndi ozo no ụlọ ọrụ kemgbe mmalite ya. Aga m aga n'ihu iji hụ na Compendium nwere ihe ịga nke ọma, gaa n'ihu nag Chris na Ali maka atụmatụ na nkwalite :). M na-launching onwe m gị n'ụlọnga n'okpuru Compendium… ọzọ na na mgbe e mesịrị.
Igodo nke mgbanwe m site na Compendium bụ na a na-enyefe ndị ahịa nlebara anya kacha mma na ihe ọmụma. Mụ na ndị ọrụ nkwukọrịta anyị na-arụkọ ọrụ nke ọma, ọfụma ndị ahịa na ndị otu ọrịre iji hụ na nke a mere - ọ ga-abụ aka rue ọnwa Disemba.
Nke mbu - ka anyi kwuo maka mgbado anya.
Ngwakọta bụ ụlọ ọrụ teknụzụ, ọ bụghị ụlọ ọrụ ọrụ. Emezuru ikike ha site na ịghara ilepụ anya ha na bọl ahụ, ịghara ịchọta site na isi ihe mgbaru ọsọ ha nke ịbụ ụlọ ọrụ ịde blọgụ ụlọ ọrụ kacha mma (na ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ịde blọgụ ụlọ ọrụ). Chris, Ali na m chọrọ ka uche ahụ gaa n'ihu.
Ikpo okwu na akụrụngwa - ekele maka ọhụụ nke Blake Matheny na ndị otu ya - dị mma karịa ihe ọ bụla ọzọ m hụtụrụla. Companylọ ọrụ ahụ nọ n'ọkwá ka ọ baa ụba, na-enweghị obi mgbawa na mgbu niile ị nụrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ ndị ọzọ. Oge eruola ka ọnụọgụ ndị ahịa chọrọ ịba ụba nke ikpo okwu na itinye ọdịnaya maka usoro inbound ahịa.
Ọzọ bụ Ohere
Gingde blọgụ na nyocha ọchụchọ bụ otu iphemiphe ọbule. Gingde blọgụ, tinyere usoro ndị ọzọ - mgbasa ozi mmekọrịta, ahịa azụmaahịa, ozi email, ọrụ ndị ahịa, nkwukọrịta nke ime, echiche ndị isi, akara, ecommerce… na-abawanye ike nke usoro na usoro ịre ahịa n'ịntanetị. Compendium Blogware ahịa na-arịọ maka enyemaka karịrị teknụzụ - na m chọrọ inyere ha aka.
Mụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime afọ iri gara aga na-enyere aka na atụmatụ a, n'onwe m yana ụlọ ọrụ dịka Gannett, Kpọmkwem Ngwaọrụ, Okporo ụzọ na Ngwakọta - Webtrends, Ndi Indianapolis Colts, Iheanacho, Home ebusa, Hotels.com, Icelandair, Taịa, Mpempe, RotoRooter, Eli Lilly, BlueLock, Datalọ Ọrụ Data Ndụ,… Ndepụta na-aga n'ihu.
Mụ na Chris, Ali na m ghọtara ọnwa ndị a. Ohere maka DK New Media ka ha buru ogwe aka ohuru ndi ahia Compendium na ulo oru ndi ozo iji nyere ndi ahia aka ka ha tinyekwuo ego na ntinye akwukwo, mgbasa ozi ndi mmadu, nyocha, email, wdg. Mụ na Ali na-arụkọ ọrụ ọnụ na Compendium iji mepụta ngwungwu maka ndị ahịa, site na Social Media Integration, Call-To-Action Design and monitoring programs, Blog Design and Integration, Annual Strategic Consulting, wdg.
Doug Theis si Datalọ Ọrụ Data Ndụ jiri m tuo “CMO maka iku”. Ọ masịrị m, na ihe ọmụma m banyere teknụzụ na-agbasawanye na ya nke ukwuu. Mmekọrịta m na ndị ọkachamara ndị ọzọ na-enye m, ọ bụghị naanị na ihe ọmụma, kama yana akụ iji hụ na m nwekwara ike inyere ụlọ ọrụ aka ịmepụta azịza ha chọrọ. Achọghị m ịbụ onye ndụmọdụ gị - na-abanye na ịgwa gị ihe ị nwere ike ịma. Achọrọ m ịbụ onye òtù ọlụlụ gị nke nwekwara ike ịrụ na atụmatụ ahụ yana ịmepụta azịza ya.
M na e nzute na kere n'ịgba mmekọrịta na Gburugburu maka Mmekọrịta Ọha, Ezigbo Ochie maka Pagwọ Achọghị, 4 Nkịta Chepụta maka Mbọn na imepụta, Doug Vann maka Drupal, Skwọsh maka Joomla, Anyiwu maka Mmụta Mgbasa Ozi, Noobie maka Teknụzụ na Mmụta Azụmaahịa, Otu nkuzi n'ihi na Usability, Ngwọta BitWise maka Ngwọta, Ekwentị mkpanaka maka Mobile Marketing, ProBlogService maka Ọdịnaya Ọdịnaya, Kristian Andersen maka atụmatụ ịzụ ahịa ụlọ ọrụ, Ozi Walker maka usoro iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa, onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetịMpempe akwụkwọ Ndepụta na-aga n'ihu!
Ndị a bụ ndị mụ na ha rụkọrọ ọrụ wee tolite ntụkwasị obi na afọ iri gara aga. Ha na-egbu ndị ahịa ma ọ bụ ndị kachasị mma na njikọ ha. Ọ pụtara na agaghị m akwado ụlọ ọrụ gị? Ọ bụghị n'ezie! Achọrọ m itolite azụmaahịa gị ma ị nwere ike inyere m aka bulie nke m. DK New Media, LLC. ga-ebido August 1, 2009! Nọrọ na-ekiri!
Jul 18, 2009 na 5:39 PM
Ekele Doug! Nke a dị ka nke a bụ mkpebi dị mfe. Enwere m obi uto banyere uto Compendiums! 😛
Jul 18, 2009 na 8:35 PM
Joel daalụ! Ndị Indiana niile kwesịrị inwe obi ụtọ banyere uto Compendium - ha na-esetịpụrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ihe atụ ịgbaso!
Jul 18, 2009 na 5:44 PM
Oh mba! Pụghị ịhapụ Compendium! Kedu onye m ga - eti aka maka ịme okwu edoghị anya, na - ekwuchitere ya maka ikike ọrụ aka nke ngwaahịa a ugbu a?
Na-egwu egwu. N'ihe niile dị mkpa, na-ekele gị maka ịdaba, Doug. Ana m atụ anya ịtụ egwu n'ihe ọhụụ gị (ọbụlagodi ma ọ bụrụ naanị iji nyere gị aka mee ka ọ ka mma.) Mana ejiri m n'aka na anyị ga-anọgide na-ahụ nnukwu ihe n'aka gị n'ọdịnihu. Kasị mma - m na-atụ anya ịhụ ihe DK New Media nwere iji mee ka Indianapolis na ụwa na nnukwu!
Jul 18, 2009 na 8:38 PM
Eziokwu ahụ bụ na Compendium na-eji ngwa nke aka ya iji mee ka atụmatụ azụmaahịa inbound… jikọtara ya na uto nke ụlọ ọrụ… abụghị ihe na-edoghị anya ma ọ bụ na-enweghị isi Robby! O nweghi ụlọ ọrụ SEO nwere ike 'nkwa' nsonaazụ - enweghịkwa ikpo okwu ọ bụla! Ọ bụ otu ndị folks si eme ka ikpo okwu dị mkpa - ọ bụ ebe ahụ ka m nwere ike inyere ha aka.
Daalụ Robby! Enwere m ekele maka nkwado ma na-enwe ekele mgbe niile inwe onye na-echebara m echiche iji wepụta oge ma maa m aka site n'oge ruo n'oge. Ọbụna mgbe ị kachasị njọ! (na-egwu egwu).
Jul 18, 2009 na 2:09 PM
ọ dị ka mkpebi nke ga-abara gị uru n Compendium kamakwa inye aka na-eto eto ụlọ ọrụ dị na Indianapolis
Jul 18, 2009 na 8:39 PM
Nke ahụ bụ ihe anyị abụọ na-achọ na-eme, Nat!
Nancy Myrland kwuru
Jul 18, 2009 na 7:37 PM
Ekele Doug! Already na-ama ọma ụzọ gị!
Jul 18, 2009 na 8:29 PM
Are bụ nwoke. Jide ka iji!
Daalụ Kyle! Na-atụ anya ka gị na gị nwee ọtụtụ ọrụ!
Jul 18, 2009 na 8:31 PM
Ndeewonu! M na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ ka anyị abụọ na-aga naanị gị!
Jul 18, 2009 na 9:15 PM
Bravo, Doug. Achọrọ m ka ị bụrụ nnukwu ihe ịga nke ọma na atụmatụ gị niile.
Jul 19, 2009 na 3: 47 AM
Doug, Ekele dịrị gị na njem a. Ga-abụ ihe ọ bụla ma incredibly ịga nke ọma. Jascha
Jul 19, 2009 na 8: 11 AM
Akwa ozi Doug! Ekele maka mkpebi gị. Na-atụ anya ịnụ akụkọ ọma ndị ọzọ.
Jul 19, 2009 na 12:56 PM
Na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ ọhụụ gị!
Jul 19, 2009 na 4:34 PM
Ekele maka ụlọ ọrụ ọhụrụ gị! Chọrọ enyemaka ọzọ? Ọ ga-amasị m ịmụtakwu banyere ahịa a ma rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ dị njikere itinye ihe egwu ma nọrọ n'elu teknụzụ kachasị ọhụrụ.
Jul 20, 2009 na 2: 14 AM
Dị ka nnukwu ohere maka gị na maka Compendium. Kasị mma na ihe niile! Amaara m na ị ga-akụtu ya n'ogige ahụ. Gaa nweta em DK!
Jul 20, 2009 na 1:50 PM
Nnukwu post doug! Dịka ị na-ahụ, enwere nnukwu mkpa na-enyere ndị otu ọ bụla aka iche ROI site na mgbasa ozi mmekọrịta. I nwere ikike puru iche ikuziri ulo oru otu ha g’esi abu ezigbo ndi obodo ma nwekwuo ego. Mmeri merie 🙂
Jul 20, 2009 na 2:40 PM
Enweghị ọtụtụ ndị isi nọ ebe ahụ nke ga-agba ndị ọrụ ha ume dị ka nke a. Ana m ekele gị maka nkwado gị niile kemgbe ọtụtụ afọ. Na-atụ anya ọtụtụ ihe ịga nke ọma n'ọdịnihu!
Jul 20, 2009 na 2:14 PM
Hit kụrụ ntu na isi Doug. Echere m na ịchọtala ahịa magburu onwe ya, yana ụdị azụmaahịa na-ada ụda. Nọgide na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Ekele Doug. Kpochapụ uzo gị. Na-ada ka mmeri-mmeri nke gị na compendium.
Nov 23, 2009 na 3:28 PM
Daalụ Martine! Compendium dị ukwuu kemgbe ọnwa ole na ole a. Enweghị ụzọ m gaara esi mee ya ma ewezuga ha.
Jul 20, 2009 na 3:54 PM
Ekele maka ịme mkpọpụ ahụ, Doug. Businessdị azụmahịa gị na-aga n’ihu na nke m na-anụ ka ọtụtụ mmadụ na-ekwukwa, yana.
Ihe nzuzo gị bụ ike gị iji tinye uru na ihe ọ bụla ị metụrụ, yabụ enweghị m obi abụọ na ị ga-aga n'ihu na-eme nke a n'ụzọ doro anya na azụmaahịa gị.
Jul 20, 2009 na 4:07 PM
Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ maka Indy, na anyị (Squish). Ekele m na ịmaba miri na kudos na Chris maka ịkwado gị!
Nov 23, 2009 na 3:27 PM
Daalụ Nicki! Na azụmahịa… tho obere… na-aga ugbu a.
Jul 28, 2009 na 8:36 PM
Ndewo Doug, mmụba na ọganiihu gị ọ bụla bụ ihe mara mma. Achọrọ m ka ị nwee obi ụtọ na ihe ịga nke ọma. Daalụ maka ịbụ mmụọ nsọ
Daalụ maka ụdị edemede gị, Jim! Achọrọ m imetụ gị aka n'onwe gị ma gbasaa mmemme ịde blọgụ gị.
Ọnye na -bụ Jean Greenwell?
Aug 20, 2009 na 6:08 PM
Akụkọ magburu onwe ya, Doug. Ekele na ezi echiche banyere ọrụ ọhụrụ ahụ. Na-atụ anya ikiri ihe ịzụlite.
Sep 19, 2009 na 4: 23 AM
ka ọ dị, ọ na-niile na-amalite ime ka m nwee uche ugbu a. hapu ya ka google nyere m aka ijikota iberibe onu. Daalụ maka iwebata m na compendium. isi na-agba m. dị nnọọ ka m nwere ike chepụta ụzọ imeli ya maka weebụsaịtị m!
Sep 19, 2009 na 4: 43 AM
Jenny, ihe niile bụ ihe efu na ego ị ga-enweta na ya. Zitere m Verizon Ikuku blackberry
Si: IntenseDebate ificationsma Ọkwa